Hiob 19 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Hiob anoyi (1-29)
Ɔkae sɛ, twiw a ne “nnamfo” no retwiw n’anim no, onnye ntom (1-6)
Ɔkae sɛ obiara agyaw no hɔ (13-19)
“Me gyefo te ase” (25)
19 Ɛnna Hiob kae sɛ: 2 “Mobɛteetee me kra* akosi da bɛn?+Na mode nsɛm bebubu me akosi da bɛn?+ 3 Mpɛn du ni na moatwiw m’anim;*Ɛnyɛ mo aniwu mpo sɛ moreteetee me saa.+ 4 Na sɛ ɛyɛ ampa sɛ madi mfomso mpo a,Me mfomso yɛ me ara m’asɛm. 5 Sɛ moayɛ mo adwene sɛ moremfa me nyɛ hwee,Na moka sɛ animguase a ato me no fata me a, 6 Ɛnde munhu sɛ ɛyɛ Onyankopɔn na wadaadaa me,Na ɔno na ɔde n’atena akyere me. 7 Hwɛ! Meteɛm daa sɛ: ‘Asɛm ato me o!’ nanso obiara nnye me so;+Meteɛm daa sɛ obi mmoa me, nanso atɛntrenee biara nni hɔ.+ 8 Ɔde abo fasu asiw me kwan, na mintumi ntra;Na ɔde sum akata me kwan so.+ 9 Wagye m’anuonyam afi me nsam,Na wayi ahenkyɛw no afi me ti so. 10 Obubu me kosi sɛ mɛyera;Na otu m’anidaso te sɛ dua. 11 Ne bo fuw me denneennen,Na obu me sɛ ne tamfo.+ 12 N’asraafo bom ba, na wosi akoban* twa me ho hyia;Wotwa me ntamadan ho hyia. 13 Wapam m’ankasa me nuanom afi me ho kɔ akyirikyiri,Na wɔn a wonim me ayi me baako ahyɛ me nsa.+ 14 Wɔn a me ne wɔn bɔ kosua taforo* agyaw me hɔ kɔ,Na wɔn a minim wɔn paa mpo werɛ afi me.+ 15 Wɔn a wɔabɛsoɛ me fi+ ne me mmaawa bu me sɛ ɔhɔho bi;Mayɛ ɔnanani wɔ wɔn ani so. 16 Mefrɛ m’akoa, nanso ommua me.Mibue m’ano pa no kyɛw sɛ onhu me mmɔbɔ. 17 M’ahome mpo bɔn me yere,+Na me ara me nuanom* nso, me ho yɛ wɔn nyan. 18 Mmofra nketewa mpo de m’anim ayɛ fam;Minya sɔre pɛ, na wɔafi ase rehuro me. 19 Me nnamfo a me ne wɔn kɔ ba nyinaa mpɛ m’anim ahwɛ,+Na wɔn a medɔ wɔn ayi me ama.+ 20 Me were ne me honam ahi ama aka me nnompe,+Me ne owu bɔ mpunimpu.* 21 Munhu me mmɔbɔ, me nnamfo, munhu me mmɔbɔ,Efisɛ Onyankopɔn de ɔno ara ne nsa aka me.+ 22 Adɛn nti na moretan m’ani te sɛ Onyankopɔn+Na moreteetee me a munnyae?*+ 23 Minyae a, anka wɔakyerɛw me nsɛm ato hɔ;Minyae a, anka wɔakyerɛw wɔ nhoma mu! 24 Minyae a, anka wɔde dade kyerɛwdua ne sumpii* akyerɛw*Agu ɔbotan ho ama atena hɔ afebɔɔ! 25 Efisɛ minim paa sɛ me gyefo+ te ase;Akyiri yi, ɔbɛba, na ɔbɛsɔre agyina asaase so.* 26 Sɛ wɔsɛe me were wie a,Bere a meda so ara wɔ honam no, mehu Onyankopɔn, 27 Me ara mehu no,M’ankasa m’ani na mede behu no, na ɛnyɛ obi ani.+ Nanso me mu de, mete nka sɛ mabubu!* 28 Efisɛ moka sɛ, ‘Ɛdɛn na yɛreyɛ de atan n’ani?’+ Na moka sɛ asɛm no fi me ara. 29 Mo ara nso, ɛsɛ sɛ musuro sekan,+Efisɛ sekan bɛtwe wɔn a wɔyɛ bɔne no aso;Munhu sɛ ɔtemmufo bi wɔ hɔ.”+
^ Anaa “Mobɛteetee me.” Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
^ Anaa “moayeyaw me.”
^ Anaa “M’abusuafo.”
^ Nt., “me yafunu mu mma,” kyerɛ sɛ, yafunu a ɛwoo me (me maame yafunu).
^ Nt., “Me se ho were na mede fi mu fi.”
^ Nt., “Na me honam mmee mo?”
^ Ɛyɛ dade bi a emu yɛ duru.
^ Anaa “akurukyerɛw.”
^ Nt., “wɔ dɔte so.”
^ Anaa “M’asaabo agyae adwumayɛ wɔ me mu.”